Boordii Filannoo: 'Filannoon yerooma qabameefiitti gaggeeffama' - BBC News Afaan Oromoo
Filannoon yeroodhuma qabameefitti akka gaggeeffamu Boordiin Filannoo Biyyaaleessaa beekise.
Boordiin Filannoo Biyyaaleessaa filannoo itti aanuuf na barbaachisa kan jedhe qarshii biiliyoon 3.7 koree bajataa mana mare bakka bu'oota ummataatiif dhiyeeffachusaa walitti qabduun Boordichaa Birtukaan Miidhaqsaa ibsite.
Walitti qabduuun boordichaa isa har'a gaazexessitootaaf taasifteen akka himteetti, baasiin gaafatamees kan kana duraa waliin wal biratti yoo ilaalamu haaluma guddina ummataa fi sababiiwwan garaa garaatiin olaanadha jette jirti.
Waa'ee paartii siyaasaa Itoophiyaa 108ffaa...
MM Abiy Ahimad dhimmoota ijoo irratti maal jedhan?
Kana keessayis miiliyoona 900 dhaabbilee arjoomtootaa irraa argachuu karoorfamu Birtukaan dubbatte jirti.Filannoo itti aanuun wal qabatees haalli nageenyaa, gaaffileen eenyummaafi ofiin of bulchuu bakkeewwan garaa garaatti ka'aa jiran yaaddoo ta'uu akka malan qaamoolee tokko tokkoon ka'aa kan jiru ta'us, boordichi kan hubate ta'u ibsiteeti.
Keessattuu baatiiwwan muraasaan dura gaggeeffamuun kan irra ture lakkoofsi ummataafi manneenii sababiiwwan adda addaatiin osoo hingaggeeffamiin hafuunsaatiin walqabatees, osoo kun hinta'iin finalloon itti aanu attamiin gaggeefamuu danda'a gaaffii jedhuufis, haala caasseeffama adeemsa filannoo Itoophiyaa keessa jiruutiin galmeen filtoonnaa lakkoofsa ummataafi manneenii waliin kallattiin kan walhin qabanee akka ta'e dubbateetti.
Haata'u malee, filannoofi lakkoosfi ummataa osoo walii deegaranii bu'a qabeessa ta'usaa hindhoksine.
Keessattuu haala nageenyaa biyyattiin keessatti argamtuun wal qabatee, yeroon filannoo dheereeffamuu akka danda'u qaamoolee garaa garaa irraa dhagahamulleen, boordiin filannoo hojiiwwaan hundaa raawwataa kan jiru haaluma guyyaa filannoo heera motummaatiin kaa'ameetiin filannichi ni gaggeefame jedhuu ta'usaatiifi sababii adda addatiin ammoo yeroonsaa geeddaramuu akka danda'u Burtukaan caqastee jirti.
"Haala hanga ammaatti jiruun nuti hojii hojjetaa kan jirru hubannoodhuma filannoon yeroodhuma qabameefiitti gaggeefama jedhuutiin," jetteti.
Siyaasa Itoophiyaa: MM Abiy Ahimad ibsa gaazexeessitootaa irratti maal jedhan?
27 Hagayya 2018
Viidiyoo Birtukaan Miidhagsaa: ‘‘Filannoo dhufu irratti dorgomuu baadhuus, qarqara dhaabadhes hin taajjabu’’